४० नाघेपछि यस्तो किसिमको हुनुपर्छ खानपान शैली « Lokpath
४० नाघेपछि यस्तो किसिमको हुनुपर्छ खानपान शैली
उमेर बढ्दै गएपछि शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू देखा पर्न थाल्छ । उमेर बढ्दै गएपछि शरीरको मांसपेशीहरू कमजोर हुन थाल्ने, छाला पातलो हुने, पाचन क्रिया कमजोर हुने, भोक कम लाग्ने जस्ता किसिमका परिवर्तनहरू देखा पर्दै जान्छन् ।
यो उमेरमा कस्तो किसिमको खाना उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अमेरिकाको नेशनल ईन्टिच्यूट अफ मेडिसिनले अनुसन्धान गरेको एउटा निर्देशन दिएको छ । यो उमेरमा रहेका व्यक्तिलाई खानामा कम क्यालोरी चाहिन्छ तर अरू पोषक तत्त्वको मात्रा भने बढी हुनु आवश्यक हुन्छ भनिएको छ । यो उमेरमा पुगेका व्यक्तिले आफूले खाने गरेको खानेकुरामा चिल्लो पदार्थ भएको, चिनीको मात्रा बढी भएको, क्याफिन भएको र फास्ट फुड जस्ता किसिमका खानेकुराहरू कम खानु नै शरीरका लागि राम्रो हुन्छ भनिएको छ ।
४० वर्षको उमेर पार गरेपछि आफ्नो खानामा २ वटा फलफूल र हरियो सागहरू अनिवार्य रूपमा सेवन गर्नुपर्छ । यो उमेरमा ६ देखि ८ घण्टा निदाउनु र दैनिक न्यूनतम पनि ३० मिनेट कुनै पनि किसिमको व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४० वर्षको उमेर पार गरेपछि खानपिनमा कस्तो किसिमको सजगता अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका डाइटिसियनले दिएको सुझावहरू ।
चिनीको सेवन दैनिक २ देखि ४ चम्चा भन्दा बढी गर्नु हुँदैन । यदि चिनी धेरै सेवन गर्ने बानी यो उमेर समूहमा परेको छ भने डायबिटिज, कलेजोको समस्या, मोटोपन र मुटु रोगका समस्याहरू देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
यदि तोकिएको यो मात्रा भन्दा बढी चिनी खाने बानी परेको छ भने ३० देखि ४० मिनेटसम्म कुनै पनि किसिमको कसरत गर्नु पर्छ, भर्‍याङ चढ्ने, डोरी खेल्ने, कुद्ने, एरोबिक गर्ने काम गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यले चिनीले गर्ने मोटोपन र मुटुको समस्यालाई बढ्न दिँदैन ।
यो उमेरमा पुगेका व्यक्तिले दैनिक ५ ग्राम भन्दा बढी नुन नखानु नै राम्रो मानिन्छ । नुनको सेवन बढी भएमा उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, टाउको दुख्ने र पेटको क्यान्सर समेत हुनसक्छ ।
यदि नुन बढी खाने बानी छ र कम खान सकिँदैन भने ३० मिनेट दैनिक साईकिलिङ, तौल घटाउने कसरत, १० मिनेट ब्रिस्क वाक अवश्य गर्नुपर्छ । यी विभिन्न कसरतले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
दैनिक ८ वटा देशी बदाम, २ काजू र २ वटा ओखर खाने गर्नु धेरै नै राम्रो हुन्छ । यदि यो मात्रा भन्दा धेरै खाएमा तौल बढ्ने र मुटुसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि देखिन सक्छ । यदि यस्ता पदार्थहरू बढी खानुहुन्छ भने १० मिनेट कार्डियो कसरत, ३० मिनेट योग र ५ मिनेट गहिरो श्वास प्रश्वास लिने कसरत गर्नै पर्ने हुन्छ ।
हप्तामा वा १५ दिनमा एक पटक मात्र मैदा वाट बनेको खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । यदि मैदाको सेवन धेरै गरेमा कोलेस्ट्रोल बढेर मोटोपन हुने र रक्त धमनीसँगका सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्छन् ।
यदि मैदाको सेवन यो मात्रा भन्दा बढी गर्ने गरिएको छ भने दैनिक २० मिनेट साईकिलिङ, ब्रिक्स वाक गर्दा धमनीसँग सम्बन्धित समस्याहरू कम हुनेछन् ।
तारेको वा फास्ट फुड खानेकुरा
तारेको खानेकुराहरू १५ दिनमा १ पटक खानु नै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यदि तारेको खानेकुरा बढी खाएमा मोटोपन हुने, डिप्रेसन हुने, मुटुसँग सम्बन्धित समस्या हुने, क्यान्सरको खतरा बढ्ने र हृदयाघात हुने सम्मका खतराहरू बढ्छन् । यदि यस्तो किसिमको खाना मन पर्छ र नियमित खाने गर्नु भएको छ भने एउटा बर्गर खानु भयो भने १ सय मिनेट, फ्रेन्च फ्राइज खानु हुन्छ भने ९० मिनेट, २ टुक्रा पिज्जा खानुहुन्छ भने ८४ मिनेट शारीरिक श्रम हुने किसिमको काम गर्नुपर्छ ।
एक दिनमा तिन कप चिया कफी पिउन सक्नुहुन्छ । यदि धेरै पिउनु भयो भने एसिडिटी, अनिन्द्रा, बेचैनी हुने जस्ता किसिमका समस्याहरू देखा पर्छन् । त्यसैले तोकेको मात्रा भन्दा बढी सेवन गर्नुभयो भने ५ मिनेट गहिरो श्वास लिने किसिमको कसरत गर्नुपर्छ, ३० मिनेट तेज गतिले कसरत गर्नुभयो भने निन्द्रासँग सम्बन्धित समस्याहरू हट्दै जान्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,२०,बुधबार ०६:२२
महिलाको तल्लो पेट र पुरुषको अण्डकोषका समस्या हटाउने योग आसन (भिडियोसहित)
महिलाहरूको तल्लो पेट र पुरुषहरूको अण्डकोषमा हुने समस्याको समाधान गर्ने सरल योग आसन लिएर योग गुरु लोकनाथ खनाल प्रस्तुत हुनुभएको
यस्ता ड्राइ फ्रुट्सको सेवनले मधुमेह नियन्त्रणमा गर्छ
मधुमेह अर्थात् सुगरका बिमारीहरूको संख्या अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । स्वस्थ जीवनशैली नअपनाउने र
बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहोस्, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
काठमाडौं । तपाई कत्तिको पानी पिउनुहुन्छ ? पानी मानव शरीरका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । पानी बिनाको जीवन कल्पना समेत
यी १५ प्रेरक भनाइ, जसले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ !
काठमाडौं । जीवन संघर्षशील छ । हरेक उतारचढावबीचको यात्रा नै जिन्दगी हो । जिन्दगीमा सफलता त्यही व्यक्तिले हात पार्छ जो
पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ : पर्यटन सचिव कोइराला
चिकित्सकमाथि मोसो प्रकरण : तीनजना धरौटीमा रिहा, एकजना पुर्वपक्षको लागि…
पर्यटक स्वागत गर्न तयार छ बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी
मानब बेचबिखनको आरोपी महिला २५ वर्षपछि पक्राउ
नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हुनु चिन्ताको विषय : बिजुक्छे
जगदम्बा अटो ग्रुपलाई भन्सार कार्यालयले गर्‍यो जरिवाना
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै चीनविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन
राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज
५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए चूडामणि शर्मा